Amanqaku kaJascha Kaykas-Wolff kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UJascha Kaykas-Wolff
UJascha Kaykas-Wolff ukholelwa kwimigaqo emibini engundoqo: Fumana amathuba apho kungekho mntu ujonge khona; Kwaye, ungaze usilele ngendlela efanayo kabini. Yindlela ejolise ekuthengiseni i-Agile. Idityaniswe ne-BA kwiPsychology evela kwiKholeji yaseWhittier, yiyo emsebenzele kakuhle nangobuchule. Njengomthengisi wexesha elide kunye nomcebisi onamava olawulo ku-Yahoo!, Microsoft, Webtrends, Involver (efunyenwe yiOracle), kunye neMindjet, ngoku ukhokelela kwintengiso BitTorrent.
Kwincoko nomhlobo wam kunye nomlingane uJoe Chernov, uVP Marketing eKinvey besitshintshisana ngeminye yemibuzo ebesiyifumene sobabini esiyifumene ngaphakathi kwamaqela ethu nakwabo sisebenza nabo. NgoJoe ekubeni ngumthengisi wentengiso yonyaka ngekhe umangaliswe kukwazi ukuba omnye weyona mibuzo yakhe ibuzwa yile: Ndiyiqala njani inkqubo ephumelelayo yokuthengisa umxholo? Umbuzo wesibini awubuza rhoqo yile: